Izinkolelo Zabantu Ngokwenzeka Emizimbeni Yabo – The Ulwazi Programme
Izinkolelo Zabantu Ngokwenzeka Emizimbeni Yabo
Kunezinkolelo abantu abanazo ngezinto ezisuke zenzeka ngesikhathi esithile emizimbeni yabo njengokuthi kusuke kukhona into ezokwenzeka, okungenzeka kube okuhle noma okubi. Lomkhuba abantu abaningi bakhule kuyizinkolelo ezazishiwo ngabantu abadala nabo bakholelwa ukuthi kuyenzeka ngempela lokho. Nazi izibonelo ngezansi: Njengokuthi
Uma udlula endaweni enemimoya emibi, bathi uzwa izinwele zishwaqa, ushaywe wuvalo kuqhaqhazele namadolo kodwa ungabonanga noma ungezwanga lutho. Umzimba uzwa lokho okubi okusuke kulapho kodwa iso nengqondo kusuke kungazi lutho futhi kungaboni lutho.
Omunye umuntu uke
ahlasimulelwe umzimba nje kungonakele lutho kuthiwa usuke evakashelwe abakubo abangasekho (amadlozi akhe amvakashele ngalesosikhathi noma azama ukumxwayisa) ngoba kukhona abasuke bekusola, lowo kudingeka enze indlela yokuxoxa nawo ukuze athole ukucaciseleka.
(kunyakaza) ithanga noma isinqe kumakoti kusuke kuzobuya umkhwenyana ikakhulukazi uma esebenza kude nasekhaya.
Uma kuluma noma kubaba
isandla sisuke sibika okuthize, kuke kuphambane abanye kube yisandla sokudla abanye kube isinxele. Lokhu kusuke kubika ukuthi kunemali noma incwadi ozoyithola.
Uma kuluma indlebe
kusuke kukhona okhuluma ngawe, kuyenzeka kube kancane noma kube yisikhathi eside, futhi kuyenzeka kube ukuthi ukhuluma kahle kokunya akhulume kabi kokunye kube isihlobo esesikukhumbule. Kuyenzeka kudlule izinsuku umbone lowomuntu akutshele ukuthi bebekhuluma ngawe abale nalabo ekade enabo.
kusuke kukhona umuntu okhuluma ngawe kabi.
Uma udikizelwa ihlo
ngenhla kusuke kukhona umuntu ozombona okade wamgcina, uma kudikiza elangezansi kusuke kukhona into ezokuphatha kabi uze ukhale kodwa kwabanye abantu lokhu kuke kuphambane.
Uma kudikiza umlomo
ngenhla noma ngezansi , ngenhla kusho ukuthi uzohleka, ngenzansi usuke uzokhuluma into ezokuphatha kabi udinwe mhlawumbe ungagcina usukhala. Kodwa nakhona kuye kuphambane komunye kube ngenhla ukukhuluma uze udinwe komunye kube ngenzansi ukuhleka.
Uma kubaba unyawo
ngaphansi kusuke kubika ukuthi kukhona uhambo ozoluthatha. Kuya ngokuthi lilume kangakanani uma lilume kancane usuke uzothatha uhambo olufishane uma lulume kakhulu usuke uzothatha uhambo olude.
1 thought on “Izinkolelo Zabantu Ngokwenzeka Emizimbeni Yabo”
08/02/2019 at 5:25 pm
UKUDIKIZELWA YIHLO NGEZANSI KWESANDLA SOKUDLA KUSHO UKUTHINI
Leave a Reply to NOBANTU	Cancel reply